Otu esi edozi igwe ịgbado ọkụ electrofusion nkịtị nsogbu? | Lechuang
Otu esi edozi igwe ịgbado ọkụ electrofusion nkịtị nsogbu?
Ụdị nke ngwakọta ọkụ eletriki, eriri na -ewe iwe ọkụ, igwe ịgbado ọkụ electrothermal na ngwaahịa ndị ọzọ dị iche. A na -ere ngwaahịa anyị ebe niile. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla chọrọ, biko kpọtụrụ anyị. Ka anyị mụta maka nsogbu ndị a na -ahụkarị nke igwe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ
Ụdị ngwaahịa na ihe nrụpụta nke onye nrụpụta ọ bụla mepụtara dị iche iche, yabụ ekwesịrị ịhọrọ igwe eletriki igwe na -akwado akwụkwọ ntuziaka na koodu mmanya mgbe ị na -ahọrọ igwe ịgbado ọkụ electrothermal.
Ma ọ bụghị ya, a ga -ebelata oke ojiji n'oge eji ya. Iji belata arụmọrụ ojiji, bute mkpofu na -enweghị isi ma metụta mgbanaka mgbanaka ọrụ. Mgbe a na -ewu ya, n'ozuzu, mgbe ọkụ dị n'ime 50m site na igwe ịgbado ọkụ, ọ dị mkpa ịhọrọ eriri ntinye 2.5mm2, na ndị ọzọ. Ogologo oge ka ogologo, ogologo eriri，nke ukwuu voltaji, mgbe voltaji grid anaghị emezu ihe achọrọ, a ga -ahọpụta generator iji kwado ike ọkụ n'oge a. Enwere ihe siri ike maka igwe ịgbado ọkụ voltaji, nke ndị ọkachamara na ndị ọrụ agbaziri ga -eji. A naghị ekwe ka ndị na -abụghị ndị ọkachamara bịaruo nso, iji zere ihe egwu na -enweghị isi nye ndị ọrụ.
Oge ezipụ: Aug-24-2021